China Cat Nest Doter Litter Pet Cat na Dog Bed Dog obere nkịta Cat Ihi ụra Bag ute Emechiela Cat House Nọgide Na-ekpo ọkụ na Winter ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta | MiaSein
Cat Nest Dog Litter Pet Cat na Dog Bed Dog obere nkịta na-ehi ụra akpa ute Mechiri Emechi Cat House Nọgide Na-ekpo Ọkụ na Winter
Aha ngwaahịa：Cat Nest Dog Litter Pet Cat na Dog Bed Dog obere nkịta na-ehi ụra akpa ute Mechiri Emechi Cat House Nọgide Na-ekpo Ọkụ na Winter
Nkọwa:Họrọ akwa dị elu, nke na-agaghị emerụ anụ ụlọ anụ ahụ, ka anụ ụlọ wee nwee ahụmịhe ka mma. Ọmarịcha ọrụ, ngwaahịa na-adịgide adịgide ma sie ike.
Item aha: Pet akwụ
Style: Ibe akwụ Zipa
Size (in cm): S-47 * 45cm, M-53 * 51cm
Njirimara: Mee ka anụ ụlọ zuo ike
Ricdị ricdị: Uwe + obere plush
Usoro ịsa: You nwere ike ịsacha akwa nkịta na ncha mmadụ. Ọ bụrụ na enwere ike ịnye anụ ụlọ ọgwụ pụrụ iche, ọ ga-aka arụ ọrụ iji gbuo nsen parasite nke uwe anụ ụlọ merụrụ. A ga-asacha akwa nkịta na nke ndị mmadụ iche. Ejila ịcha ọcha chlorine ma ọ bụ ikuku oxygen.
Usoro nchekwa: chekwaa ya iche ma ọ bụ na wrapping akwụkwọ iji zere ịbụ nke ndị ọzọ na-acha.
Nkwado mmezi: Zere ịkpọtụrụ na nkọ na ike ike isiokwu na ike alkaline isiokwu; họrọ ebe dị jụụ na ikuku dị jụụ na nkụ tupu nchịkọta; mepee kabinet n'oge oge nchịkọta iji kpoo ma kpoo; na elu okpomọkụ na iru mmiri oge, ikuku akọrọ ọtụtụ ugboro iji gbochie mildew.
Nke gara aga: Dog Uwe Spring na Mgbụsị akwụkwọ uwe Abụọ-legged N'ogbe Sweater nwa nkita Pet obere Small Breathable
Osote: Puppy Dog Clothes Female Teddy Bichon cotton Coat Chihuahua Bulldog Corgi puppy puppy thickening pet mgbụsị akwụkwọ na oyi uwe
Cat arịgo ụba Anọ anọ Cat ịrị Fr ...
Pet Uwe Big Dog straipu Bow Kee Suut Uwe ...